Golaha Ammaanka oo maanta fadhi ka leh Arrimaha Doorashooyinka, Amniga & AMISOM. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Golaha Ammaanka oo maanta fadhi ka leh Arrimaha Doorashooyinka, Amniga & AMISOM.
Golaha Ammaanka oo maanta fadhi ka leh Arrimaha Doorashooyinka, Amniga & AMISOM.
Muqdisho (Walwaal Online)- Maanta oo ah 22-ka Febaraayo 2021 waxaa gelinka dambe kulmaya Golaha Ammaanka si dood adag ugu yeesho Xaaladda Soomaalida sida ammaanka, Doorashooyinka, Siyaasadda & waqti kordhinta ciidanka Midowga Afrika ee AMISOM ku howlgala.
Golaha Ammaanka oo kulmay 9-kii Febaarayo 2021 ayaa dhageystay xogta Soomaaliya, waxaana warbixinta la wadaagay Wakiilka Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ee Arrimaha Soomaaliya James Swan.
Fadhigaas waxaa lagu go’aamiyay in fursad la siiyo Madaxda Dowladda Federaalka ee Muddo xileedkoodu dhammaaday, Dowlad Goboleedyada & Gobolka Banaadir si loo dhammeystiro kulamada qabyada ah ee looga xal gaarayo Khilaafka hortaagan dhaqangalka heshiiskii 17-kii September 2020.
Maxaa qabsoomay inta u dhaxeysa 9-ka ilaa 22-ka Febaraayo 2021?
Muddada laga joogo waqtiga u dhaxeeya labada kalfadhi ee Golaha Ammaanka kulamo sidaas u muuqda ma qabsoomin gaar ahaan kuwa looga hadlayo ka gudubka caqabadaha hortaagan doorashooyinka heshiiska laga gaaray 158-Cishe kahor.
Dedaallo la isugu keeni lahaa Madaxda Federaalka, Dowlad Goboleedyada & Gobolka Banaadir ayaa guuldareystay kadib markii isku tuur-tuur uu galay gogosha uu soo jeediyay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo iclaamiyay in Garoowe lagu qabto, balse markii ay kordhay dalabta la xiriira in Muqdisho lagu qabto uu 17-kii Febaarayo 2021 shaaciyay in Caasimadda Dalka la isugu yimaado.
Guddiga farsamo ee Federaalka, Dowlad Goboleedyada & Gobolka Banaadir ayaa Baydhabo fadhi ku yeeshay, waxaana kasoo baxay warmurtiyeed ku xusan in heshiis laga gaaray qodobadii lagu kala tagay Shirkii Dhuusamareeb (4).
Waxaa Muqdisho ka maqan Madaxda D/Goboleedyada Puntland & Jubbaland oo ka qaybgeli lahaa Shirka lagu saxiixayo heshiiska Baydhabo ka dhacay, waxaana xaalka uu u muuqdaa Jug-jug oo bartaada joog, waa haddii uu dhaqangeli waayo heshiiskaas.
Sidoo kale waxaa muddadaas dhacay isku dhaca Ciidamada Dowladda Federaalka & ilaalada Midowga Musharixiinta, iska hor imaad ayaa saq dhexe ka dhacay Meel Hoteel u dhaw Madaxtooyada oo ay degeen labo Madaxweyne & Guddoomiye Baarlamaan hore.
Xubno kale ayaa lagu rasaaseeyay wadada Xiriirisa Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde & Isgoyska KM4, musharixiinta hor boodeysay dibadbaxaas ayaa Dowladda ku eedeeyay isku day dil oo ay la damacsaneend.
Haddaba, Golaha Ammaanka go’aan Caynkee ah ayuu ka qaadan karaa xaaladda Soomaaliya gaar ahaan muranka hortaagan qabsoomidda Doorashooyinka?
Previous articleMaxay ka wada hadleen Xasan Sheekh & Madaxweynaha Hir-Shabeelle?
Next articleTurkiga oo Saamileyda Soomaalida ugu baaqay in wadahadal ay ku dhammeeyaan khilaafka ka dhex jira.